Keenya oo ku hanjabtay inay Dhadhaab albaabada isugu laabto - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xerada qaxootiga Dhadhaab waxay 100 u jirtaa xuduudda Keenya la leedahay Soomaaliya. Sawirle: Daniel Breece/Sveriges Radio
Keenya oo ku hanjabtay inay Dhadhaab albaabada isugu laabto
Keenya oo ku goodisey dib u celinta qaxootiga Dhadhaab
La daabacay torsdag 12 maj 2016 kl 15.10
Nasiib-darro waxay waddammada caalamku caadeeysteen badankood, caqliga ah in qaxootigu ey sida ugu dhakhsiyaha badan waddammadoodii hooyo dib ugu laabtaan, sida ay sheegtay Isabella Lövin oo aannu wareeysi kala yeelanney qaxootiga soomaalida ee ku dhaqan Xeryaha Dhadhaab.
Halka uu maamulka dalka Keenya ku dhawaaqay maanta inuu albaabbada isugu dhufan doono xeryaha Dhadhaab, laguna tilmaamo inay tahay xeryaha qaxootiga ee caalamka, middeeda ugu wayn. Qaxootiga carrigaa ku nool ayay badankood yihiin soomaali.
Dawladda Keenya ayaa go’aanka tallaabadaasi ku macneeysaynabad-gelyada inay xeryahaasi ku dhuumaaleeystaan dadyoow la fikir ah ururka argagixisada ee Al-shabaab.
Horay ayay dawladda Keenya laba jeer ugu hanjabtay inay qaxootiga soomaalida ee ku dhaqan xerada Dhabaab oo tiradoodu gaarsii-san tahay 350 000 oo ruux ay dib ugu celin doonto dalkoodii hooyo.
Hanjabaadahaasi oo ku soo beegmey xilli uu ururka Al-shabaab weerarro ku qaaday goobo ka mid ah dalka Keenya. Iyadoona hanjabaadan saddexaad ay u eg tahay inay ka duwan tahay kuwii hore, maadaama uu maamulka dalkaasi toddobaadkii ina dhaafay uu albaabka u laabay si lama filaan ah hayadda qaxootiga ee dalka Keenya ee lagu magacaabo ” Department of Refugee Affairs”.
Yaasiin Maxamed Cariif, wuxuu dalkan ku dhaqnaa muddo kooban oo dhowr sannadood ah. Wuxuuna ka mid ahaa dadyoowgii martida ku soo noqday xeryaha Dhadhaab muddo kooban, isla markaana si qota dheer war uga haya xaaladda uu qaxootigaasi ku sugan yahay.
Yaasiin Maxamed Cariif ayaannu wareeysi kula yeelanney. Waa kan isaga oo sawir guud naga siinaya xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab:
Wasiirka taageerada caalamiga Sweden Isabella Lövin oo ay noo suurtagashay inaannu wax ka weydiinno xaaladda qaxootiga ku sugan xeryaha Dhadhaab ayaa carrabka ku adkeeysay in ey qaxootigaasi ku sugan yihiin xaalad cakiran, isla-markaana aaney jirin goob ay kaga horreeyso waxey dib ugu laabtaan dalkoodii hooyo. Maadaama bayna raacisay in haddii ey jireen ra’sumaal ey ka soo carareen oo aaney iminka waxba ka harsaneyn:
- Xitaa haddii uu ammaan ka jiro gobollada Soomaaliya qaarkood way adag tahay in dib loogu noqdo meel aanay waxba kaaga horreeyn.
- Caqabaduse waxay tahay in aan looba ogoleyn qaxootigan iney dalka Keenya ka shaqeey-santaan oo ey bulshadana dhex-galaan. Waana arrin aan loo dul-qaadan karin in xuquuqdoodii bani’aadmi-nimo meel looga dhaco qaxootigaasi. Waana howl aan aad u xiiseeynayo sidii aan gacan uga geey-san lahaa in dadyoowgaasi la caawiyo, sida ay sheegtay Isabella Lövin, wasiirka kaalmada caalamiga. Dhowaantanna loo magacaabay inay ka mid noqoto labada hoggaamiye ee xisbiga Doogga, Miljö Partiet.
Dib u rarka Dhadhaab. Faa'iido mise khasaaro?